ယနေ့မှစ၍ LEGO Super Mario 64 set အသစ်သို့ခုန်တက်လိုက်ပါ
ပထမဆုံး Lego စူပါမာရီယို Princess Peach အတွက်ပုံကို p အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်art အသစ်က၏ ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block.
အောက်တိုဘာလသည်ဤမျှနှင့်လတ်ဆတ်သောစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် Lego တစ်နှစ်အတွင်းအခြားလတစ်ခုကိုရေတွက်ရန်သတ်မှတ်သည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်သည် စူပါမာရီယို ယနေ့မှအကြောင်းအရာသည် ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Blockလေး၊ စုစည်းမှု classic ဂိမ်းများမှအထင်ကရ Question Mark Block တွင်သိမ်းထားသောအဆင့်အားလုံးကို
ထိုအဆင့်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊ Lego အဖွဲ့သည်အက္ခရာများမှအသေးအဖွဲကိန်းဂဏန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည် စူပါမာရီယို ၆၄ တွင်ရန်သူများနှင့်ရောနှောခြင်းတို့ပါဝင်သည် friends ဆင်တူသည်။ p အဖြစ်art မှိုနိုင်ငံ၏အုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောနိုင်ငံသားများအနက်မှပထမဆုံးဖြစ်သည် Lego Princess Peach ၏သရုပ်ဖော်ပုံသည်ဧရာမမော်ဒယ်တွင်စတင်ပေါ်ထွက်လာသည်။
အုတ်တစ်လုံးလက်တစ်ဆုပ်စာထက်မပိုသောဂဏန်းများသည် King Bob-omb နှင့် Chain Chomp ကဲ့သို့ဆင်တူဒီဇိုင်းများကိုခွဲခြားရန်ကူညီသောပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဇာတ်ကောင်များ၏အရေးအကြီးဆုံးကဏ္aspectsများကိုဖမ်းယူသည်။
အဆင့်များသည်ဂိမ်းများကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းတို့ရှိ Mario နှင့် Luigi controller ကိန်းဂဏန်းများကို သုံး၍ စကင်ဖတ်နိုင်သည့်တစ်လျှောက်လုံး၌ဝှက်ထားသောပါဝါကြယ်များပါ ၀ င်သည်။ Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း နှင့် Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း.
Lego ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးနှင့်ရူပဗေဒမှယခုရနိုင်သည် Lego စတိုးဆိုင်များအတွက်£ 159.99 / $ 169.99 / € 169.99